Allgedo.com » 2010 » December » 06
Home » Archive Daily December 6th, 2010 Wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlay Safarro uu dibadda ku aaday. Dec 6, 2010 R/wasaare Ku xigeenka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Federaalka KMG-ka Soomaaliya oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay Go’aannadii kasoo baxay Shirkii Madaxda wadamada Afrika iyo Yurub ay ku yeesheen Dalka Liibiya.
Mudane Maxamed Cabdullaahi Oomaar R/wasaare Ku xigeenka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha Dibadda oo saxaafadda Shir jaraa’id... Waxgaradka Gobolka Gedo “Ilma adeerayaalow Dagaal dambe yaan laga ridin Gobolka Nabadda halaga shaqeeyo”. Dec 6, 2010 Waxgaradka Gobolka Gedo ayaa ku baaqay in lagawada shaqeeyo nabadda degmooyinka Gobolkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay xiisada colaadeed.
Odayaasha dhaqan Gedo ayaa amaan balaaran usoo jeediyay ganacsatada Gobolka oo gacan weyn ka gaystay sidii ay dhinacyada dagaalamaya u kala joogi lahaayeen degmooyinka ay kala maamulaan.
Nabadoon Cabdullaahi Cali oo kamid ah Odayaasha magaalada Garbahaareey... Wasaaradda Caafimaadka oo sheegtay in ay Dawooyin Lacag la’aan ah siin doonto Bukaanada Muqdisho. Dec 6, 2010 Wasaaradda caafimaadka Dowladda KMG ah ayaa maanta sheegtay in ay wax ka qaba doonto xaaladaha caafimaad darro ee kajira magaalada Kadib markii wasiira caafimaadka uu booqday mid kamida Isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Wasaaradda caafimaadka oo saxaafadda kula hadlay gudaha Isbitaalka Martiini ayaa sheegay in wasaaradiisu ay kaalinta koowaad siin doonto wax ka qabadka cudurada Haweenka... Somaliland oo Cambaaraysay Tababarka iyo Hubka lasiiyay Ciidanka Puntland. Dec 6, 2010 Maamulka Somaliland ayaa shaaciyay in ay walaac balaaran ka qabaan xoojinta dhanka ciidanka ah ee Midowga Yurub u sameeyeen maamulka Puntland kajira ee Cabdi Raxmaan Faroole hogaamiyo.
Wasiir katirsan maamulka Somaliland ayaa magaalada Hargaysa ka sheegay in aysan ku faraxsanayn warka Boosaso kasoo yeeray islamarkaana ay dowladaha reer Yurub kala hadlayaan taageerada xad dhaafka ah oo ay siinayaan... RW Farmaajo “Shabaab waxaan uga digaynaa Askaraynta Carruurta Soomaaliyeed”. Dec 6, 2010 R/wasaraaha Xukuumada KMG ah ayaa shaaciyay in xukuumadiisu ay dagaal lageli doonto xoogaga Islaamiyiinta gaar ahaan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo uu sheegay in ay caqabad ku tahay jiritaanka Dowladda KMG ah.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo boqolaal Askari kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladiisu ay xoogga saarayso qalabaynta ciidankii hore si meesha ay uga baxdo ku tiirsanaanta... Radio Allgedo/ Waraysiyo